[Review Sách] "999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình": Hãy Sống Xứng Đáng Với Tuổi Trẻ Của Mình | Anybook.vn - Anybook
[Review Sách] “999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình”: Hãy Sống Xứng Đáng Với Tuổi Trẻ Của Mình | Anybook.vn
Mandeha ny fotoana tsy miherika, sarotra ny miverina ny fahatanorana, izany no lalàna henjana momba ny natiora. Koa tsy tokony handany ny fahatanorana isika tsirairay, fa ny fahatanorana. Miaina amim-pahamendrehana amin’ny fahatanoranao no hafatra sarobidy ambaran’ilay boky 999 taratasy ho ahy ento ho an’ireo tanora mbola sahirana amin’ny lalan’ny fiainana feno tsilo sy fanamby.
Na inona na inona zava-misy iainan’ny fiainana dia tsy tokony hanome tsiny ny olona isika, aza mieritreritra foana hoe trosa aminao ity tontolo ity na misy mamadika anao. Eo amin’ny fiainana, ny tsirairay dia hanana fotoana milamina na fotoan-tsarotra rehefa tojo zava-tsarotra. Amin’ny fotoana mampalahelo indrindra amin’ny famoizam-po, dia vao mainka tokony hianaranao hanitsy ny tenanao ianao, hanatsara ny tenanao. Satria ny andro sarotra no fotoana itomboanao!
Na manao ahoana na manao ahoana ny fiainana, mitsikia amim-panantenana foana
Boky 999 taratasy ho ahy ny Mieu Cong Tu dia manome lesona manan-danja ho an’ny mpamaky. Na dia diso fanantenana sy diso lalana aza ianao, ity boky ity dia hanome anao ny antony manosika handresena ny rivotry ny fahatanorana. Manana fahasahiranana sy tsilo ary fanamby maro hatrany ity fiainana ity. Indraindray izy ireo dia hampahory anao, hahatonga anao tsy ho afa-manoatra, hanakivy anao te-hafoy ny zava-drehetra. Tsarovy mandrakariva anefa fa ny fahorianao dia tahaka ny ravina kely any amin’ny ala fararano feno ravinkazo. Mihevitra ianao fa ory, fa ny hafa kosa vao mainka tsy faly. Aza pessimiste fotsiny noho ny tsy fahombiazana kely. Mbola lavitra ny andro, mbola eo anoloanao ny ho avy, tsy mila pessimista mihitsy. Mbola manana fahafahana ny tanora, nahoana no mandany ny tanora amin’ny tsy fahombiazana tsy azo ivalozana? Mitsikia, be fanantenana ary minoa mandrakariva fa vitanao izany.
Manomboka anio dia asio tsiky foana isan’andro, eto amin’izao tontolo izao dia kely ny zava-drehetra ankoatry ny fahaterahana sy ny fahafatesana. Na manana olana aza ianao dia aza manasarotra ny tenanao, na inona na inona zava-dratsy mitranga ankehitriny, aza malahelo. Androany no zandriny indrindra amin’ny andro manaraka, satria mbola misy ny ampitso, anio vao fiandohan’ny ho avy.
Ny tsiky foana no varavarana voalohany mitondra any amin’ny fahasambarana. Mitsikia mandrakariva ary omeo fahafahana hiaina fiainana tsara kokoa sy misy dikany kokoa ny tenanao. Mpanoratra ny boky 999 taratasy ho ahy Miao Gongzi dia olona miaina miaraka amin’ny tsiky foana. Miao Cong Tu dia mino fa na inona na inona fahoriana atrehanao dia tokony ho olona be fanantenana sy falifaly foana ianao. Tsy teraka aho mba halahelo, handratra noho ny zavatra tsy mendrika, olona tsy mendrika. Nahoana no mitomany azy ireo, malahelo azy ireo?
Na dia manana antony an’arivony hampitomany anao aza ny fiainana dia tsy maintsy mitady antony ihomehezana ianao, satria izany no fiainana, ny hany azontsika atao dia ny mampatanjaka ny tenantsika.
Ny fatiantoka sy ny ranomaso dia anisan’ny fiainana, tsy azo ihodivirana izany. Tsy afaka mitsiky fotsiny isika mba ho matanjaka amin’ny fanaintainana. Ny dingana lalovanao no dingana izay mampatanjaka anao. Optimisme ho matanjaka, fihomehezana ho falifaly, izany no zava-miafina lehibe mba tsy handalo foana ny fahatanorana. Aza “mividy tady hamatotra ny tenanao” mandrakizay amin’ny fijaliana sy ny tsy fahombiazana fa “ny fanaintainana tsy tazonina mandritra ny alina dia fahasambarana”.
READ Sách Cách Tư Duy Và Giao Dịch Như Một Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán – ECCthai | Anybook.vn
Tsy mila miezaka ny hampifaly ny rehetra
Na manao ahoana na manao ahoana ny hatsaranao amin’izy ireo dia tsy ho afa-po aminao mihitsy izy ireo. Misy sakaiza ratsy ataony tsinontsinona, fa ny sakaiza tsara halany. Miresaka ratsy foana ao ambadika izy ireo, miresaka momba ny tenany, ary mitsara ny tenany araka ny fihetseham-pony tafahoatra. Ny boky “Taratasy 999 ho an’ny tenantsika” dia manoro hevitra antsika foana fa tsy mila mitazona ny alahelontsika ao am-pontsika isika, mainka fa ny fiheveran’ny olona antsika, ny fomba fanehoan-kevitra. Zon’izy ireo ny milaza izany, fa anjarany ny malahelo na faly mandre izany teny izany. Aza miraharaha izay hitan’ny hafa fa ataovy tsara ny asanao. Ny fieritreretana be loatra ny teny ratsy, ny lolompo be amin’ny olona tsy mahazo ahy dia vao mainka reraka.
Amin’izao fotoana izao dia tsy te hampifaly olona intsony aho. Na olon-tiana na namana, na iza na iza mampionona ahy dia mijanona amin’io olona io aho, rehefa reraka aho dia miala amin’io olona io. Ny mampifaly ny hafa dia tsy azo ampitahaina mandrakizay amin’ny famoronana fifaliana ho anao. Aleo manirery toy izay mandainga, toy izay manenina toy izay mihelina. Afaka miditra ao am-poko ianao ary mitondra ahy toy ny mpanjaka, raha tsy izany dia tsy mila milaza izany aho.
Anao izao fiainana izao, tsy mila miezaka ny hampifaly izao tontolo izao, mba hampifaliana ny olona rehetra. Ny fiainana dia natao hahafinaritra, hampiadana, tsy hiasa mafy mba hahatonga ny olon-drehetra ho tia anao sy ny tenanao ho reraka be. Ny mampifaly ny hafa mba hahatonga azy ireo ho tahaka anao mandrakizay dia tsy ho sambatra toy ny famoronana fifaliana ho anao. Noho izany, tokony ho fantatrao ny fomba hitiavanao ny tenanao kely, hahay hiezaka kely ho an’ny tenanao. Raha mbola tsara ianao, dia hisy olona ho tia anao nefa tsy hiezaka hampifaly azy: “Raha mamelana ianao, dia hisy lolo hanidina aminao, raha tsara ianao, dia handamina azy Andriamanitra.” Ary ilay olona tsy tia anao rehefa tena tsara ianao dia tena tsy mety aminao, raha tsy tianao dia tsy mila hanenenana izany.
Amin’ny alalan’ny boky feno dikany 999 taratasy ho ahyMieu Cong Tu dia te hilaza amin’ny tanora foana fa lozabe ny fiainana, saingy tsy afaka manary ny herim-ponao ianao. Raha tsy manana herim-po ianao, ahoana no ahafahanao mandeha amin’ny lalan’ny fahasahiranana? Raha tsy manana herim-po ianao, ahoana no hanananao fahasahiana handresy ireo sakana amin’ny lalana mankany amin’ny fahasambarana? Ka ao am-ponao dia tsy maintsy manana herim-po lehibe foana ianao, dia hanana motivation hanandrana.
Ny fahatanorana no fotoana iatrehana olana sy tolona. Tena tsy maintsy mino ianao, ao ambadiky ny ezaka dia mitombo hatrany ny valisoa.
Tsy maintsy mino ny tenanao ianao, manana herim-po handroso. Rehefa manana fo feno fitiavana ianao dia tsy misy mahasakana anao. Ny fahaverezan’ny herim-po no fiafaran’ny lalana rehetra mankany amin’ny fahasambarana sy ny fahombiazana. Raha tsy misy herim-po dia tsy afaka manao na inona na inona. Satria rehefa tsy manam-pinoana, tsy manana herim-po, ahoana no hahasahy hanatanteraka ny nofinofiny sy ny faniriany?
READ Tóm Tắt Sách: Bàn Về Tự Do | Anybook.vn
Tsy dia marani-tsaina loatra ianao, tsy mampianatra vao haingana toy ny hafa, matory tara sy matory, tsy mifoha, rehefa matory, dia mbola manontany tena sy manontany tena ianao anio, andao hilalao mamelombelona be rahampitso.Ezaka aloha. . Indraindray ny zavatra mampatahotra indrindra dia tsy ny zava-misy fa teny an-dalana handeha dingana vitsivitsy miadana kokoa noho ny hafa, fa tsy ny fo mafana fo te hanenjika.
Ny fahaverezan’ny herim-po, ny fahaverezan’ny fo feno hafanam-po amin’ny ho avy no tena mampatahotra indrindra eto amin’izao tontolo izao. Ny mandeha miadana dia zavatra kely, ny mijanona dia zavatra lehibe. Noho ny fahasahiranana, dia kely ny dingana miadana, fa raha very ny herim-po hanohy ianao, dia mety ho maizina sy manirery ny lalana lavitra mankany amin’ny fahasambarana. Hazavao ny jiro amin’ny ho avy amin’ny fo feno hafanam-po sy herim-po.
Miezaha foana ary miezaka mafy
Miezaha hanao foana ny asa mandreraka indrindra eto amin’izao tontolo izao. Tsy misy olona tsy miezaka ny hahatratra fahombiazana, na dia kely aza izay miezaka mandritra ny iray na roa andro mba hikasika ny fahasambarana. Noho izany, ny fiezahana dia resaka mandritra ny androm-piainan’ny olona iray. Tena mandreraka ny dia hanatratra ny nofinofy, izany no mahatonga ny olona maro te-kifoka, tsy te hiezaka intsony. Satria tsy manana antony manosika intsony izy ireo hanandrana ny ampitso. Tonga amin’ny “taratasy 999 ho an’ny tenako” i Miao Cong Tu indray dia mamoha ny antony manosika ny olona reraka amin’ny fiezahana hanatratra ny nofinofiny.
Folo taona lasa izay, araka ny fidiram-bolan’ny ray aman-dreninao no nitondran’ny olona manodidina anao anao. Folo taona aty aoriana dia hiantehitra amin’ny fidiram-bolanao ny olona manodidina anao mba hitsaboana ny ray aman-dreninao sy ny zanakao! Toy izany ny fitondran’ny olona, ​​ka tsy manan-tsafidy ianao fa miasa mafy!
Raha tsy miezaka ianao dia ho tsinontsinona mandrakizay, tsy vitan’ny hoe ho ambany ianao, fa ny fianakavianao sy ny namanao koa dia ho tsinontsinona. Ny olona dia afaka milalao amin’ny mahantra, ny tsy an’asa, fa tsy hilalao amin’ireo izay tsy miezaka. Alohan’ny faha-30 taonanao, raha mahantra ianao, dia mety ho noho ny toe-javatra misy anao. Fa rehefa feno 30 taona, raha mahantra ianao, dia satria tsy manandrana. Koa na sarotra toy inona aza ny lalan’ny fiainana, dia tsy tokony hilavo lefona mihitsy ianao, na dia vao mainka aza mitaredretra satria: “Ny fiainana ankehitriny dia efa telo taona lasa izay, fa raha mbola miaina amin’izao fiainana izao ianao, dia miaina toy ny telo taona lasa izay. , ka telo taona manomboka izao dia mbola ho toy izany ihany ianao. Aza mangataka andro na kivy fa manomboka anio aza mitsahatra miezaka. Na sarotra toy inona aza ny toe-javatra iainanao dia ny fikasan’olombelona no hanjaka, ny fahasahiranana dia handalo rehefa tena manana fo.
Ditin-kazo manitra, 95% ny rano 5% ihany no esoteric ingredient ny mpanamboatra. Mitovy ihany ny olombelona, ​​95% amin’ny ankapobeny dia mitovy, ny 5% sisa no mahasamihafa azy ao anatin’izany ny toetra manokana eo amin’ny dingan’ny fahamatorana, ny fahafinaretana, ny fanaintainana, ny filan’ny nofo,… Huile essentielle Dimy taona hanadiovana, folo taona handrafetana ranomanitra. , ny olona koa dia mila mandalo ny dingan’ny fitomboana mba hamoronana ny maha-izy azy manokana, mba ho tokana.
READ [Review Sách] “Những Kẻ Xuất Chúng”: Cuốn Sách Gối Đầu Giường Của Những Người Thành Công | Anybook.vn
Tsy izay rehetra miasa mafy no hahazo fahombiazana. Ny olona mahavita fahombiazana dia ireo izay manao ezaka bebe kokoa noho ireo izay miezaka. Betsaka ny olona efa niezaka mafy nefa tsy nahomby. Koa mifona, mifona. Fitsapana ny fiainana izany. Raha miezaka ianao fa tsy manao hatramin’ny farany dia tsy mahomby indray mandeha, aza kivy fa ny vokany dia mitohy ny tsy fahombiazana. Ary raha tsy mahomby imbetsaka ianao nefa mbola miezaka ny haharitra, indray andro any dia hahatratra fahombiazana ianao. Fahombiazana ary koa ny menaka manitra noforonina maka fotoana be dia be ary mitaky faharetana ny bartender. Ny fahombiazana dia natao ho an’ireo izay miezaka hatrany hatrany, fa tsy miezaka mandritra ny iray na roa andro ary avy eo milaza fa nanao izay ho afany.
Tsy misy lalan-kizorana ny fahombiazana, tsy misy làlambe ny fahasambarana. Ny fahombiazana rehetra dia avy amin’ny ezaka tsy misy vizana. Ny fahasambarana rehetra dia avy amin’ny fiezahana sy ny fikirizana mahazatra indrindra.
Mihazakazaka foana amin’ny lalana mankany amin’ny masoandro, ny aloka dia hianjera ao aorianao. Ny hany fomba hahazoana fahasambarana dia ny miezaka mafy. Amin’ny fiezahana ihany no hahita fahombiazana, tsy misy olona tsara vintana mandrakizay, fa tsy maintsy miantehitra amin’ny tenanao foana. Ny fahasambarana naorina tamin’ny tananay no fahasambarana maharitra sy maharitra indrindra. Isan’andro dia miezaka kely ianao any aoriana any dia ho lasa vokatra goavana izany ezaka izany. Aza atao ambanin-javatra mihitsy ny ezaka kely, ireo ezaka kely ireo dia ampahany amin’ny piozila mba hamoronana fahombiazana lehibe. Ka andramo amin’ny zavatra kely indrindra sy mahazatra indrindra. Raha tsy miezaka ianao anio, ary toy izany koa rahampitso, dia hiverina tsy misy dikany ny fiainanao. Aza avela haverina amin’ny fomba tsy misy dikany sy mankaleo ny fiainanao. Miezaha foana ho amin’ny hoavy mamirapiratra, fiainana sambatra kokoa. Ny hoavinao rahampitso dia miankina amin’ny fanapahan-kevitrao hanandrana na tsia omaly.
Boky 999 taratasy ho ahy avy amin’i Mieu Cong Tu dia manome lesona mahasoa sy sarobidy ho an’ny mpamaky. Ny boky dia manome fanantenana ho antsika hanana herim-po bebe kokoa ho any amin’ny masoandro. 999 taratasy ho ahy tsy vitan’ny hoe mamporisika antsika hanatratra ny fahombiazana, fa milaza amintsika koa ny fomba hahatonga antsika ho be fanantenana kokoa, ho sambatra kokoa mba ho eo amin’ny molotra hatrany ny tsiky ary tsy ho very maina ny fahatanorana.
Famerenana amin’ny antsipiriany nataon’i Tran Hanh – Bookademy
Araho ny fanpage Bookademy raha te hanavao vaovao mahaliana momba ny boky amin’ny rohy: Bookademy
Mafana fo amin’ny fanoratana ianao, tia mamaky teny ary te hanaparitaka ny kolontsaina mamaky teny amin’ny vondrom-piarahamonina YBOX.VN? Misoratra anarana ho Bookademy CTV amin’ny rohy: http://bit.ly/bookademy_ctv
Ny zon’ny mpamorona ny lahatsoratra dia an’ny Bookademy – Ybox. Rehefa mizara na mamerina dia mitanisa ny loharano feno “Anaran’ny Mpanoratra – Bookademy.” Ny lahatsoratra misy fehezanteny tsy feno dia tsy ekena ary tsy maintsy esorina.
Previous: Hình Ảnh Hoạt Hình Nàng Tiên Cá Đẹp Và Dễ Thương Nhất | Anybook.vn
Next: Tải mẫu đơn xin việc file word chuẩn giúp bạn thành công | Anybook.vn